Baaq Beelweynta Cali Bare (Habar Jeclo) Gobolada , Sanaag,Sool iyo Saraar
Friday April 06, 2018 - 20:39:15 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Anagoo ah Qurba jooga, Aqoonyahanka iyo wax garadka Beelweynta Cali Bare (HJ) ee ku nool Qaarada Europe Middle
East iyo wadanka guduhiisa. Waxaanu ugu horeyn asalaamaynaa dhamaan bulsha weynta reer Somaliland meelkasta oo ay joogaan .Marka xigta waxaanu halkan uga duceynaynaa dhamaan mujaahidiintii ku shahiiday halgankii dheeraa ee loo soo maray wadanka Somaliland oo ay ka midyihiin halgankii daraawiish oo beeshu ka qadatay qayblibaax, beelweynta Cali Bare oo lahyd ciidnkii ugu badnaa ee kaga jiray Daraawiish Beelaha Isaaq gaarahaan HJ. beeshan oo uu ka dhashay mujaahid kii weynee ee ka mid ahaa asaasayaashii Daraawiish Haji Sudi oo markii danbe ku shahiiday dagaalkii Afbakayle. Beeshu waxay sidoo kale qayb weyn ka qaadatay gobonimo doonkii ka bilowday Somaliland 1940-1960 ee lagu raadinayey shanta Somalia. Waxay ka loo beelweynta Cali Bare qayb weyn ka qaadatay Dagaaladii qadhaadhaa ee dhex maray mujaahidiintii SNM iyo Dowladii Maxamed Siyaad Bare 1981-1991 Dagaaladaa oo ay beesha Cali Bare kaga dhinteen Mujaahidiin aad u tiro badan sida Dagaalkii Burca Duuray 1984 oo ay beesha kaga dhinteen 15 Mujaahid oo uu ka mid ahaa Mujaahid maxamed aadan Jamac, Faarax Saalax Muuse iyo Mujaahid Abdiraxmaan Maxamed Case uu ahaa Taliyihii guutadii 1-aad ee ururkii SNM ee ka hawl geli jiray dagaaladii ka dhacay jidka u dhaxeeya Burco iyo Caynaba, isla markaana uu ka qeyb galay dagaalo ka dhacay Burco, dhoqoshay, Balidhiig, Caynaba, Badweyns, Qoridheere, Waxaa sidoo ka ka mid ah mujaahidiinta Beesha Mujaahid Maxamed Faarax Cali Daad iyo Gel Cismaan Cawed Xaashi oo ka mid ahaa saraakiishii Milatarigii SNM, waxuu 20 bishii March ee 2018 ku geeriyooday magaalada Hargeysa.
Beelweynta Cali Bare (HJ) waxay si mug leh uga soo qayb qaadatay dagaaladii wadanka dib loogu xoreynaaney. Dagaaladaa oo ay keeneen markii la waayey CADAALAD, SINAAN, IYO MIDNIMO, laguna bedeshay Eex, Qabiil. Iyo wax la mid ah.
1)Haddaba Beeshan waxay cod dheer ku muujineysaa in dowlada Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi aanay ka helin saamigii beel ahaan ay xaq u lahayd.
2)Beelweynta Cali Bare waxay leedahay xildhibaano muxaafid iyo mucaarad ah oo ay kala mid tahay reer Somaliland.
3)Beelweynta Cali Bare waxay dowladan Muuse biixi ka tirsaneysaa cadaaladdaro iyada oo aan helin wax wasiir ah ama wasiir ku xigeen oo ay xaq u lahayd.
4) Beelweynta Cali Bare waxay dawladan Muuse Biixi ka sugeysaa in ay soo celi so wax wada lahaanshihii, cadaaladii iyo wada jirkii Somaliland ay lahayd.
5)Beelweynta Cali Bare waxay aaminsan tahay in Cadaaladii iyo midnimadiiba wax is ka badaleen loona baahan yahay in la helo Sinaan, cadaalad iyo horumar. Horumarka waxaa ka horeeya Cadaalad iyo Sinaan.
Madaxweyne, Umada reer Somaliland waxay kaa sugeysaa waaxii ay kugu doorteen ee aad ugu dhaaratay. Ee ahayd in aad cadaalad iyo sinaan ku maamuleyso.
Shaqsiyaadka qoraalkan gudbinaaya